azetidines Producer cicmo biochemical biochemical cdmo
Products > Azetidiin
Azetidine waa unug heterocyclic hudheel ah oo ku jira seddex seddex caro iyo hal nitrogen atom. Waa dareere ah heerkulka qolka leh ur xooggan oo ammonia ah waana mid xoogan marka la barbardhigo badiba aminada labaad.
Azetidiin iyo noocyada dheef-shiid kiimikaadka ah ayaa ah qaabab dhif ah oo dabiiciga ah. Waxaa suura gal ah, inay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah astaamaha muginka ah iyo badaridiin. Waxaa laga yaabaa in azetidine ugu badan oo ay ku jiraan wax soo saarka dabiiciga ah waa azetidine-2-carboxylic acid, a homolog non-proteinogenic of proline.